“” မာနရှင် ဥမ္မာခင် “” – Grab Love Story
”သူငယ်ချင်း ငါတော်တော်အခက်အခဲ ဖြစ်နေလို့ပါကွာ။ ကူညီပေးပါလား”
”ခက်တယ်ကွာ။မင်းကလဲ ဇွတ်ကြီးပဲ။ အေး ရရင် ငါပြောမယ်။ မင်းကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းပေးခဲ့”
ငြိမ်းချမ်း တယောက် မငြိမ်းချမ်းနိုင်သေးပါ။ သူထောင်က လွတ်လာတာမကြာသေး။ သူထောင်ကျရတာလဲ ခုသူမျက်နှာအောက်ကျပြီး အကူအညီတောင်းနေရတဲ့ ဝေယံဟိန်းရဲ့ အပြစ်လဲမကင်းပေ။ သူတို့တွေက တောင်ကြီးနည်းပညာတက္ကသိုလ်က ပထမနှစ်ကတည်းက တဆောင်တည်း နေခဲ့ခင်ခဲ့ကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ။
မေဂျာတွေ မတူကြပေမယ့် ဆိုးဖော်ဆိုးဖက် ငတ်ဖော်ငတ်ဖက်တွေမို့ ညီအကိုတွေထက် ချစ်ကြသည်။ သူက မိဘမရှိ။ ဦးလေးဖြစ်သူက ကြည့်ရှူ့စောင့်ရှောက်ထားတာ။ ညီအကိုသားချင်းမရှိတော့ သူငယ်ချင်းတွေကို အရမ်းမင်သည်။ ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်လာရင် အစစအရာရာ အနစ်နာခံသည်မို့ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေပေါသည်။
နောက်ဆုံးနှစ်စာမေးပွဲဖြေပြီးညမှာတော့ သူငယ်ချင်းတွေ ခွဲရတော့မယ်ဆိုပြီး သောက်ကြစားကြသည်။ ပြီးတော့ လျှောက်လည်ကြတော့ သူက မသွားချင်။ မူးနေလို့ တခုခုဖြစ်မှာစိုးလို့တားသေးသည်။ဝေယံထက်က မရ။ အတင်းကိုသွားချင်နေသည်။ သူကတော်တော်မူးနေသည်။ ဆိုင်ကယ်သူစီးမယ်ဆိုတော့လဲ ပေးမစီး။
သူ့နောက်က ဘယ်သူ့မှမလိုက်ရဲ။ သူကလိုက်ပြီး ထိန်းရသည်။ လျှောက်လည်ကြရင်း လုံခြုံရေးရဲတွေနဲ့ ငြိကာ ပြသာနာတက်ကြသည်။ သူက အတန်တန်တားတဲ့ ကြားက ဝေယံထက်က တားမရ။ ရဲတွေကစက်နဲ့ လူခေါ်တော့ ရောက်လာတဲ့အခါ ထွက်ပြေးကြရင်း ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကို ဖြတ်ကျုံးလိုက်သည်။ သူတို့လဲ ဆေးရုံရောက်သွားသည်။
ဝေယံထက်တိုက်လိုက်တဲ့ ဆိုင်ကယ်က မောင်းတဲ့ကောင်မလေး နေရာမှာ ပွဲချင်းပြီး ဆုံးသွားလို့ ကောင်မလေးရဲ့မိဘတွေက အမှုဖွင့်ထားသည်လို့ သူငယ်ချင်းတွေက ပြောသည်။ ဝေယံထက်ကြောက်နေသည်။ သူ့မိဘတွေ ချက်ချင်းလိုက်လာပြီး အမှုပိတ်ပေးဖို့ လုပ်ပေမယ့်မရ။ ထောင်က သေချာပေါက်ကျမည့်မို့ ဝေယံထက် အဖမ်းမခံပဲ ထွက်ပြေးမယ်လုပ်သည်။ သူငယ်ချင်းတွေက အတင်းတားရသည်။
နောက်ဆုံး သူက သူ့မှာ ဘာမှမရှိ။ သူ့ဦးလေးကလဲ သူ့ဟာနဲ့သူ။ သူထောင်ကျလို့ ဝမ်းနည်းမယ့်သူမရှိ။ ဝေယံထက်က မိဘအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ သူ့ကောင်မလေးကလဲ တငိုငိုတရီရီ။ နောက်ဆုံး သူဘယ်သူ့ကိုမှ မတိုင်ပင်ပဲ ဆိုင်ကယ်ကို သူမောင်းတာပါလို့ ဝန်ခံလိုက်သည်။ သူငယ်ချင်းအားလုံးအံ့သြကုန်ကြသလို သူတို့ကိစ္စကို သိတဲ့ရဲတယောက်ကတောင်သူ့ကို မင်းထောင်ကျမှာနော်လို့ သတိပေးသည်။
နောက်ဆုံး သူထောင်ကျသွားတော့ ဝေယံထက်က ထောင်ကထွက်လာရင် ဘာပဲအကူအညီလိုလို သူ့ဆီလာခဲ့ပါ သူပြန်ပြီးကျေးဇူးဆပ်ချင်ပါတယ်လို့ ပြောသည်။ သူထောင်ကျတော့ အင်းစိန်ထောင်ကျသည်။ ထောင်ဝင်စာလာတွေ့မယ့်သူမရှိ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်က သူ့သူငယ်ချင်း ဇွဲနိုင်က လာတွေ့သည်။ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး အကြောင်းပြောပြသည်။
ဝေယံထက်က အိမ်ထောင်ကျနေပြီ။ သူ့ကောင်မလေးနဲ့မဟုတ်။ သူဌေးသမီးနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး သူဌေးဖြစ်နေပြီ။ ကျန်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေက ဘယ်သူက ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုပြီးပြောသည်။ နောက်ပိုင်း သူ့သူငယ်ချင်းတွေ တယောက်ပြီးတယောက်လာတွေ့ကြသည်။ ဝေယံထက်တော့မပါ။
သူထောင်ကလွတ်တော့ သွားစရာမရှိ။ ဦးလေးက ဆုံးသွားတာ နှစ်နှစ်ကျော်ပြီ။ တကောင်ကြွက်တစ်မျက်နှာ။ နေစရာမရှိ။ စားစရာမရှိ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ကပ်နေပြီး အလုပ်ရှာပေမယ့် ထောင်ထွက်တစ်ဦးမို့ အလုပ်ကမခန့်ချင်။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေက နိုင်ငံခြားမှာ ရောက်တဲ့သူနဲ့ နယ်မှာရောက်တဲ့သူနဲ့။ နောက်ဆုံး ဝေယံထက်ဆီသွားပြီ အကူအညီတောင်းတော့ ရှောင်ဖယ်ဖယ်။
”တောက် ဒီခွေးသား ကျေးဇူးရှိလို့ ကျေးဇူးဆပ်တာပေါ့ကွာ”
”ထားလိုက်ပါကွာ။ငါလဲအရမ်းကိုအခက်အခဲ ဖြစ်နေလို့။ အေးလေ သူလဲ ငါလိုထောင်ထွက်တစ်ဦးကို ဘယ်လိုအလုပ်ပေးချင်မလဲ။ သူကခုဆို ကုမ္ပဏီရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူ။ ပြီးတော့ သူဌေးအငယ်စားလေ”
”ဘာဆိုင်လဲကွာ သူအစား မင်းထောင်ကျခံတာလေ။ အားလုံးသိတာပဲ”
”ချမ်းကြီး မင်းနည်းနည်းတော့ သည်းခံပေးကွာ။ ငါအမြန်ဆုံး အလုပ်ရှာပေးမယ်။ ငါလဲ အလုပ်တွေမပြတ်သေးလို့။ သူငယ်ချင်းစိတ်ချ။ မင်းကိုမှမယုံရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ ယုံစရာမရှိဘူး။ မင်းရဲ့ အကြောင်းကို ငါတို့အသိဆုံးပဲ။ ရော့သူငယ်ချင်း မင်းအသုံးလိုနေမှာစိုးလို့။ ဒီတိုင်းပေးရင် မင်းကယူမှာမဟုတ်ဘူး။
မင်းအဆင်ပြေတဲ့တနေ့ကျ ပြန်ဆပ် ဟုတ်ပြီလား”
”အေးကျေးဇူးကွာငါမင်းဆီက ယူနေရတာ များလှပြီ”
”မလိုဘူးဟျောင့်။ နောကတခါဆို လက်သီ ဟားဟားဟား”
ဒီလိုနဲ့ ဆယ့်ငါးရက်လောက်ကြာတော့ ဇွဲနိုင်က အပေါင်းအသင်းတွေကို ပြောလိုက်သည်ထင်သည်။ ဝေယံထက် သူ့ကို သူ့အိမ်မှာ ခြံစောင့် အလုပ်ကိုပေးသည်။ သူလဲ ဝမ်းသာသွားသည်။
အိမ်ရောက်ရောက်ချင်း ဆောက်နဲ့ထွင်းသလို သူ့မိန်းမ ဥမ္မာခင်က သူ့ကို ကြည့်ပြီး ”ကိုကိုက ဘယ်လိုလူနဲ့အပေါင်းအသင်းလုပ်တာလဲမသိဘူး ဒီလိုထောင်ထွက်တစ်ဦးကို အရေးအရာလုပ်ပြီး အလုပ်ပေးသေး” လို့သူ့ကို အထင်သေးတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ကာ ပြောတော့ သူ့ဘဝမှာ တခါမှဒီလို အထင်အမြင်သေးတဲ့ အကြည့်နဲ့ ကြည့်ကာ ပြောတာမခံခဲ့ရဘူးပေ။
ထောင်ကျတော့လဲ ထောင်ထဲမှာ အလိုက်သိမှု အနစ်နာခံမှုတွေကြောင့် လူခင်များရသလို ထောင်ကထွက်တော့လဲ ထောင်ထွက်မှန်းမသိကြ။ သိတော့လဲ သူ့ရဲ့အပြောအဆို အပြုအမူနေပုံထိုင်ပုံတွေကြောင့် အထင်သေးမခံရ။ အလုပ်လိုချင်သော်လည်း ထောင်ထွက်တစ်ဦးမို့ မခန့်ချင်တာကို နားလည်သည်။
ခုလို ရှေ့မှာ ပေါ်တင်ပြောပြီး အထင်သေးတဲ့ အကြည့်မျိုးနှိမ့်ချတဲ့ အမူအရာမျိုးကို ခံလိုက်ရတော့ စိတ်ထဲမှာတော်တော်ကို ဒေါသထွက်သွားရပေမယ့် မျက်နှာမပျက်မိအောင် ထိန်းလိုက်ရသည်။ ရုပ်လေးလှသလောက် အထင်သေးအမြင်သေးရှိတဲ့ ဥမ္မာခင်ပါလား။ သူဝေယံထက်တို့အိမ်မှာနေစဉ်အတွင်း ဝေယံထက်ကတစ်မျိုး ဥမ္မာခင်ကတမျိုး နှိမ်ကာ ဆက်ဆံတက်သည်။
ဝေယံထက်က သူငယ်ချင်းကောင်းမပီသ။ သူ့ကို သူငယ်ချင်းများက ဆက်သွယ်လို့အဆင်ပြေစေရန် သူထောင်ကထွက်လာချင်း ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ပေးထားသည်။ အဆင်ပြေလားမေးတော့ အဆင်ပြေတယ်လို့သာ ပြောရသည်။ သူငယ်ချင်းတွေဆုံတဲ့အခါမျိုးတွင် ဝေယံထက်က ဘယ်တော့မှမခေါ်။ နောက်မှ သူငယ်ချင်းတွေမေးမှ သိရသည်။
ဆုံမည်ကိုသူမသိဘူးပြောတော့ သူငယ်ချင်းတွေက မင်းမလိုက်ချင်ဘူးလို ဝေယံထက်ကပြောတယ်လို့ ပြန်ပြောကြသည်။ သူတခါတလေတော့ ဝေယံထက်တို့လင်မယားအကြောင်း ပြောမိသည်။ သူ့ကို သူငယ်ချင်းတယောက်အနေနဲ့ မဆက်ဆံချင်တောင်မှ အိမ်စေတယောက်လို မဆက်ဆံသင့်ဘူးလို့မြင်မိသည်။ ထမင်းဟင်းစားရတာတောင် ခွဲခြားမှုရှိသည်။
စိတ်ထဲမှာ တော်တော်ကို စိတ်နာမိသည်။ သူတို့မှာသမီးလေးတယောက်ရှိသည်။ နှစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီး ချစ်စရာအတော်ကောင်းသည်။ ကလေးက သူ့ကိုခင်ပေမယ့် သူတို့တွေက မဆက်ဆံခိုင်း။ တစ်နှစ်နီးပါလုပ်ပြီးတော့ သူငယ်ချင်း သက်ဦးရဲ့အကူအညီနဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်ရသည်။ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးလဲဖြစ်တာမို့ လစာကမဆိုးပေ။
သူ့ရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်ရည်နဲ့ အနစ်နာခံမှု ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုတွေကြောင့် တစ်နှစ်လောက်ကြာတော့ သြစတြေးလျကိုသွားဖို့ တာဝန်ပေးခံရသည်။ သုံးနှစ်လောက်ကြာတော့ သူပြန်လာတော့ ပိုက်ဆံအတော်များများစုမိတာမို့ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းနဲ့ ကားတစ်စီးဝယ်ကာ ပိုတဲ့ငွေတွေကို ဘဏ်မှာစုထားနိုင်သည်။
အပိုသုံးစရာလဲ မရှိတာမို့ သူ့အတွက် လစာက ပိုရုံမက စုပင်စုနိုင်သည်။ ချစ်ရမယ့်သူလဲ မတွေ့သေးတာကြောင့် ကြေးစားတွေနဲ့ တွေ့လိုက် ကကတွေနဲ့တွေ့လိုက်နဲ့ ဘဝကို ပျော်ပျော်ကြီးဖြတ်သန်းနေသည်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆုံတော့ ဝေယံထက်နဲ့ပါ တွေ့သည်။ သူကတော့ မျက်နှာပြောင်ပြောင်ပင်။ သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ သိပ်မကျေနပ်ပေမယ့် ဘာမှတော့မပြောတော့။ ဝေယံထက်တို့က အိမ်ကို ငှါးကာ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းမှာ ပြောင်းနေသည်တဲ့။
သူသွားလည်တော့ ဥမ္မာခင်ကပါ အပြောအဆိုပြောင်းလဲလာသည်။ သူက ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ မန်နေဂျာတစ်ဦးဖြစ်နေသည့်အပြင် အနေအထားကလဲ ပြောင်းလဲလာသည်ကိုး။ သြော် လူတွေ လူတွေ ပိုက်ဆံမရှိရင် သူငယ်ချင်းကအစ ပြောင်းလဲ လာပါလားလို့တွေးမိလိုက်သည်။ နောက်ပိုင်းမှာ သူဝေယံထက်တို့ လင်မယားနဲ့ မကြာခဏဆုံဖြစ်သည်။
ဘန်ကောက်တို့ စင်ကာပူတို့သွားရင်လဲ တူတူသွားဖြစ်သည်။ ဝေယံထက်တို့ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီနဲ့ သူတို့ကုမ္ပဏီက အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုရှိသည်ကိုး။ သူတို့ဆီက ယန္တယားတွေကို ငှါးရမ်းအသုံးပြုတာမို့ အမြဲဆက်ဆံမှုရှိနေသည်။ သူလဲခုဆို ကုမ္ပဏီက အရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခုကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ ရယူနိုင်ခဲ့သည်။
သူ့ရဲ့ ရိုးသားမှု ကြိုးစားမှုကြောင့် အသိအမှတ်ပြုခံရသည်လို့ သူထင်မိသည်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ရက်မှာ သူ ဘန်ကောက်ကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ သွားရသည်။ သုံးရက်လောက်နေပြီး အလုပ်ပြီးတော့ အပြန်အတွက် လက်ဆောင်ဝယ်ဖို့အသွားမှာ ဥမ္မာခင်နဲ့ဆုံသည်။ ”ဟယ် ကိုငြိမ်းချမ်း ဒီရောက်နေတာလား” ”ဟုတ်တယ်။ ဥမ္မာတို့လဲရောက်နေတာလား။ တယောက်တည်းလား။
”သမီးကမပါဘူး။ ကျောင်းတက်ရတာမို့ သူ့အဘွားတွေနဲ့နေခဲ့တယ်။ ကိုကိုက အလုပ်ကိစ္စနဲ့ စင်္ကာပူကို မနေ့ကသွားတယ်။ ဒီနေ့ပြန်ရောက်မယ် ပြောတာပဲ”
”အော် ဟုတ်လား ဒါဆိုတယောက်တည်းပေါ့။ မနေ့က ရောက်တာလား”
”ဟုတ်တယ် ကိုကိုကတစ်လလောက်ရှိပြီ။ လှမ်းခေါ်လို့လာတော့မှ အရေးပေါ်ကုမ္ပဏီက ခိုင်းလို့သွားရတာ”
သူတို့နှစ်ယောက် ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာထိုင်ရင်း ပြောနေကြသည်။ တော်တော်လေးကြာတော့ ဥမ္မာခင်လဲ ပြန်သွားသည်။ သူလဲဥမ္မာခင်ရဲ့ နောက်ပိုင်းကိုကြည့်ရင်းနဲ့မှ အင်း ဒီဆော်က မဆိုးပါဘူး။ ကိုယ်လုံးကငါးရံ့ကိုယ်လုံးလေးနဲ့။ အသားကလဲဖြူ။ သူဌေးသမီးဆိုတော့ တစ်သင်လုံးအလုပ်ကြမ်းလဲမလုပ်ဖူးတော့ အသားအရည်က အစတော်တော်လှတာပဲ။ စိတ်ဓာတ်လေးကသာ မကောင်းတာ။
ဝေယံတော့ ဘယ်လိုစားလဲတော့မသိဘူး။ သူသာဆိုရင်ဆိုတဲ့ အတွေမျိုးတွေးနေမိလိုက်သည်။ ကိုယ်လုံးကတော့ သူ့အကြိုက် ငါးရံ့ကိုယ်လုံးလေးပင်။ ဥမ္မခင်ကို အရင်ကအကြောင်းတွေပြန်တွေးမိရင်း ဒီဆော်ကို ဖြုတ်ရလို့ကတော့ အရှက်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိအောင်ကို လုပ်မယ်ဆိုပြီးစိတ်ရိုင်းတွေ ဝင်မိသည်။ သူဟိုတယ်ကိုပြန်ရောက်တော့ ဥမ္မခင်ဆီ ဖုန်းဆက်ကာ ပြန်ရောက်ပြီလားမေးတော့ ရောက်ပြီဆိုပြီးပြောသည်။
နာရီဝက်လောက် စကားပြောဖြစ်ကြသည်။ ညနေခြောက်နာရီခွဲကျော်တော့ ဥမ္မာခင်က သူ့ဆီဖုန်းဆက်သည်။ ဝေယံထက်က ပြန်မလာဖြစ်တော့ဘူးတဲ့။ သူ့ဟာသူပြန်ဖို့ပြောတာမို့ ဘယ်နေ့ပြန်မှာလဲမေးတော့ သူကလဲ ဥမ္မာခင်ဘယ်နေ့ပြန်မလဲမေးလိုက်သည်။ မနက်ဖြန်လေယာဉ်လက်မှတ်မရနိုင်တာမို့ သဘက်ခါမှ ပြန်မယ်ပြောတာနဲ့ သူလဲ တူတူပြန်ကြတာပေါ့ပြောလိုက်သည်။
ညနေစာတူတူစားကြမလားမေးလိုက်တော့ ဥမ္မာခင်ကလဲ စားမယ်လို့ပြောသည်။ သူလဲ ရေချိုးအဝတ်လဲကာ ဥမ္မာခင် တည်းတဲ့ဟိုတယ်ဆီ ထွက်လာလိုက်ပြီးခေါ်တော့ ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ကြာမှ ထွက်လာသည်။ ဇီးရိုးကွာတားဂျင်းဘောင်းဘီအကြပ်လေးနဲ့ ချိုင်းပြတ်အနက်လေးကိုဝတ်ထားသည်။
ဖြူတဲ့အသားနဲ့လိုက်ဖက်သလို ခြေအိတ်အဖြူ ဝေါ့ကင်းရူးအနက်ကိုဝတ်ထားတာမို့ တကယ့်လူငယ်စတိုင်လ်အပြည့်ပင်။ သူတိူ့ဆိုင်ကောင်းကောင်းတစ်ဆိုင်မှာ ဝင်ပြီး ညနေစာစားလိုက်ကြသည်။ သူ့ကို သောက်ချင်သောက်လေလို့ ပြောတာနဲ့ သူလဲ ဘီယာလောက်သာမှာပြီးသောက်သည်၊ ဥမ္မာခင်ကလဲ သူလဲသောက်မယ်ဆိုပြီး ယူသောက်သည်။
နှစ်ခွက်လောပ်သောက်ပြီးတော့ ဥမ္မာခင်မူးနေပြီ။ သူ့ယောက်ကျားကို မကျေနပ်တာရင်ဖွင့်သည်။ စီးပွားရေးကိုပဲ မဲလုပ်ပြီး သူနဲ့သမီးကို သိပ်ဂရုမစိုက်ကြောင်း၊ ဒီလိုတွေသွားလာရတာ သူက အတင်းလိုက်နေလို့သာ သွားနေရကြောင်း။
မိသားစုကို အချိန်မပေးကြောင်းပြောသည်။ သူလဲ အလိုက်သင့်နားထောင်ရင်း ဘီယာကို ထည့်ပေးနေသည်။ ခုလဲ သူမကို သူစိမ်းနယ်မှာ တယောက်တည်းထားခဲ့ကြောင်း ပြီးတော့ ပြန်မလာနိုင်တော့ပဲ တယောက်တည်း ပြန်ခိုင်းကြောင်း မကျေနပ်ချက်တွေကို ရင်ဖွင့်နေသည်။
တော်တော်လေးလဲ မူးနေတာမို့ ပြန်မယ်ပြောတော့ မပြန်ချင်သေးဘူး ကချင်သေးတယ်လုပ်နေသည်။ သူလဲ ကိုယ့်နိုင်ငံမဟုတ်တာမို့ ပြန်တာပဲ ကောင်းတယ်ပြောပေမယ့်မရ။ ဒါကြောင့်သူလဲ တက္ကစီတစ်စီးတားကာ ကလပ်တခုကို သွားခိုင်းလိုက်သည်။ ကလပ်ရောက်တော့ ဥမ္မာခင် ကနေလေသည်။ သူလဲ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့သာ ကြည့်နေတော့သည်။
ခဏကြာတော့ သူ့ကို အတင်းလာဆွဲခေါ်ကာ တွဲကဖို့ ခေါ်တာနဲ့ သူလဲ အလိုက်သင့် ကလိုက်သည်။ ကနေရင်းနဲ့ သူမရဲ ရင်တွေတင်တွေကို မကြာခဏထိမိသည်။ သူမကတော့ မသိ။ မောလာတော့ ဘီယာထပ်သောက်ပြန်သည်။ ဒီလို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကဲချင်တာကြာပြီတဲ့။ ကဲချင်လို့ သမီးကိုထားခဲ့ပြီးလာတာ ယောက်ကျားကမရှိလို့ မကဲရဘူးဆိုပြီးစိတ်ပျက်နေတာ သူ့ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောနေသည်။
ကလပ်ကနေပြန်လာတော့ သူမတော်တော်မူးနေပြီ။ သူလဲ သူမဟိုတယ်ထိလိုက်ပို့ပြီး အခန်းထိ လိုက်ပို့ပေးရသည်။ ဓာတ်လှေကားစီးတော့ သူမ မဟန်နိုင်။ သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာ။ သူလဲ ဖက်ထားရင်းနဲ့ နို့တွေကိုမကြာခဏထိမိရသည်။သောက်လဲ သောက်ထားတာမို့ စိတ်ကလဲ စိတ်ရိုင်းဝင်မိသည်။
အခန်းထဲရောက်တော့ တံခါးပိတ်ပြီးသူမကို ကုတင်ပေါ် ကန့်လန့်ဖြတ်ပက်လက်တင်လိုက်သည်။ သူမကတော့ မူးနေပြီမို့ မသိတော့။ သူဘေးနားမှာထိုင်ရင်း အင်္ကျီလတ်ပြတ် အကြပ်အောက်ကနေ အသက်ရှူတိုင်း မို့မို့တက်လာတဲ့ ရင်သားတွေကြည့်ရင်း စိတ်က ထလာသည်။ ဥမ္မာခင်ကို အရင်ကမကျေနပ်တာတွေကို တွေးမိပြီး ဥမ္မာခင်ရဲ့ နို့တွေကိုလက်ကလှမ်းလိုက်ပြီး ကိုင်လိုက်သည်။
အင်္ကျိကိုအောက်ကနေ မပြီးချွတ်လိုက်သည်။ အတွင်းခံကိုပါ တခါတည်းချွတ်လိုက်သည်။ နို့တွေကိုလက်နဲ့ အသာပွတ်သပ်ကိုင်လိုက်ပြီး နို့သီးခေါင်းညိုညိုလေးကို ငုံ့ကာစို့လိုက်တော့ အင်းခနဲ အသံနဲ့အတူရင်ဘတ်က ကော့လာသည်။ ဥမ္မာခင်မျက်လုံကမဖွင့်ပေ။ သူနို့တွေကိုစို့ရင်း လက်က ပေါင်တွေကို ပွတ်သပ်နေလိုက်သည်။ ဂျင်းဘောင်းဘီတိုကို ဖိနပ်ကိုမချွတ်တော့ပဲ ချွတ်လိုက်သည်။ ပင်တီမရမ်းရောင်လေးပဲ ကျန်တော့သည်။ ဖြူဝင်းတဲ့အသားအရည်နဲ့ လိုက်ဖက်လှသည်။
ပင်တီပေါ်ကနေ လက်နဲ့ ထက်အောက်ပွတ်ဆွဲချလိုက်သည်။ ပင်တီကို ချွတ်လိုက်တော့ အမွှေးတွေက ဆေးနဲ့ချွတ်ထားသည်ထင်သည်။ ပါးပါးစုစုလေး။ သူပေါင်နှစ်ဖက်ကို ကားလိုက်ပြီး လက်ခလယ်နဲ့ အဖုတ်ထဲကိုထည့်လိုက်တော့ အဖုတ်က အရည်တွေနဲ့။ အတွင်းထဲကို ဝင်သွားတော့ သူလဲ ကလိပေးလိုက်သည်။
ဂျီစပေါ့နေရာကို မှန်းကာ ခပ်ဆက်ဆက်ကလိလိုက်တော့ ဥမ္မာခင် ဖင်က ကြွကြွတက်လာပြီး ပါးစပ်က မတိုးမကျယ်အသံနဲ့ ညည်းနေသည်။ သူလဲ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို အသာမကာ ကုတင်ပေါ်ထောက်ထားတဲ့ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ချိတ်လိုက်ပြီးကိုယ်ကို ငိုက်လိုက်တော့ ဖင်ကကြွလာသည်။
သူလဲ ဥမ္မာခင်အဖုတ်ထဲကို ထည့်လိုက်ရာ ”ဗျစ် ဗျစ် ”
အဖုတ်ထဲသို့ လီးက ကြပ်ပြီးဝင်သွားရာ ဥမ္မာခင် ညည်းသံနဲ့အတူ မျက်လုံးပွင့်သွားပြီးကြည့်လိုက်ရာ ငြိမ်းချမ်းကို တွေ့လိုက်ရတော့ အလန့်တကြား ဖြစ်သွားသည်။ အစက သူမ မူးမူးနဲ့ကိုကိုက လုပ်ပေးနေတာလို့ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်နေပြီး အဖုတ်ထဲကို လီးကြီးပြီးဝင်လာတော့ နာသွားလို့ ယောင်ယမ်းမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာမှ ငြိမ်းချမ်းကို တွေ့တော့ အတင်း ရုန်းတော့ ငြိမ်းချမ်းက သူမကို ဖိထားပြီးလီးကို အဆုံးထိ ထည့်လိုက်သည်။ ဥမ္မာခင်ခမျာ အဖုတ်ထဲမှာ ပြည့်သိပ်စွာလီးကဝင်သွားပြီး နာသွားရသည်။
”ဖယ် ကိုငြိမ်းချမ်း မယုတ်မာနဲ့နော်။ ရှင့်သူငယ်ချင်း မိန်းမကို ဒီလိုလုပ်စရာလား ဖယ်နော် ကျွန်မအော်လိုက်မှာ”
”မထူးပါဘူး ဥမ္မာရယ်။ ကိုယ့်လီးတချောင်းလုံး မင်းအဖုတ်ထဲကို ဝင်နေပြီဟာကို။ အော်တော့လဲ ဘာထူးမှာလဲ။ ဘယ်သူကကြားမှာမို့လဲ ငြိမ်ငြိမ်သာ လိုးတာခံလိုက်စမ်းပါ”
”ရှင် လူယုတ်မာ။ အောက်တန်းစား။ ထောင်ထွက်ပီပီ ခွေးကျင်းခွေးကြံ ကြံတယ် ခွေးကြီး ဟင့် ဟင့် ”
”ငို ငို ကြိုက်သလောက်သာငိုစမ်း ဟဲဟဲ ကောင်းလိုက်တာကွာ။ မင်းအဖုတ်က ကလေးတယောက်အမေဆိုပေမယ့် ကြပ်နေတာပဲ။ လိုးလို့ကောင်းတာ ဟား”
ငြိမ်းချမ်းကြမ်းပြီ။ အစက ဒီလောက်ထိ ကြမ်းဖို့မရှိပေ။ ဥမ္မာခင်က သူ့အရှိုက်ထိစေမယ့် စကားကို နစ်နစ်နာနာပြောတာကြောင့် အရင်ကတည်းက နာနေတဲ့အခံရှိတော့ စိတ်က လွတ်သွားသည်။ ဥမ္မာခင် ရုန်းရင်းကန်ရင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်းမောလာသည်။ လူက မူးလဲမူးနေတာမို့ အားမပါ။
ငြိမ်းချမ်းလဲ လီးကို မဆောင့်သေးပဲ အဆုံးထိထည့်ထားရင်းနဲ့ ဥမ္မာခင်ရိုက်ပုတ်နေတာတွေကို လက်နဲ့လိုက်ဆွဲရင်း ပါးစပ်က ပြောချင်ရာတွေပြောနေသည်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဥမ္မာခင်အားပျော့လာတော့ နို့တွေကို လက်နဲ့ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကိုင်ရင်း …
”အား ကောင်းလိုက်တာကွာ။နို့တွေက အိတင်းနေတာပဲ။ ကောင်မ ဆေးတွေသုံးပြီး ယောက်ကျားကို ဆွဲဆောင်ထားတာမဟုတ်လား ဟားဟားဟား”
”ကိုငြိမ်းချမ်းရယ် တော်ပါတော့ ဥမ္မာကို သနားပါ။
လွှတ်ပါတော့ အဟင့်ဟင့် အိ အိ”
ဥမ္မာခင် မရုန်းနိုင်တော့ လေပျော့နဲ့တောင်းပန်သည်။ ငြိမ်းချမ်းခုချိန်မှတော့မရတော့။ လူကလဲ မူနေပြီမို့ စိတ်ရိုင်းက ဝင်နေပြီ။ နောင်ခါလာနောင်ခါဈေးလို့ သဘောထားကာ ရှေ့ဆက်တွန်းနေသည်။ ,နို့တွေကို ကိုင်လိုက် ညှစ်လိုက်နဲ့ ပါးစပ်ကလဲ ညစ်ညစ်ညမ်းညမ်းတွေပြောနေသည်။
ဥမ္မာခင် ဘဝမှာ ဒီလိုတစ်တစ်ခွခွပြောတာတခါမှ မကြားဖူးသလို အပြောလဲမခံရဘူး။ ခုလို တစိမ်းတဦးရဲ့ ပယ်ပယ်နယ်နယ် ကိုင်ခြင်းခံရတာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပင်။ သူမယောက်ကျားတောင် ခုလို တခါမှမကိုင်ဖူး။ ငြိမ်းချမ်းက တစ်တစ်ခွခွပြောသလို နေရာအစုံကို လိုက်ပြီးကိုင်နေတာမို့ စိတ်ကအရမ်းကို ဝမ်းနည်းလာပြီး ကိုကို့ကို အရမ်းသတိရမိသည်။
ကိုကို့ကို သူမသစ္စာဖောက်သလို ဖြစ်သွားပြီလို့ တွေးမိပြီး မျက်ရည်က ကျလာပြန်သည်။ ဒါကိုငြိမ်းချမ်းက တွေ့တော့ တဟားဟားနဲ့ ရယ်ပြီး နို့နှစ်လုံးကို ညှစ်ကိုင်ကာ ခါးအားနဲ့ လီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ခပ်ဆက်ဆက်ဆောင့်ချလိုက်တော့..
”ကောင်းလိုက်တဲ့ အဖုတ်။ ကြပ်နေတာပဲ လိုးရတာ။ စောက်ကောင်မ အရမ်းလိုးလို့ကောင်းတယ်ကွာ”
ဥမ္မာခင်တယောက် ဝမ်းနည်းပက်လက်နဲ့ ငိုနေပေမယ့် တဖြည်းဖြည်း အဖုတ်ထဲက လီးကို မသိမသာ လက်ခံလာသည်။ အရည်တွေက ထွက်လာကာ လီးက အဝင်အထွက်ချောလာသည်။ ငြိမ်းချမ်းရဲ့ဆောင့်အားက အားနဲ့မာန်နဲ့ ဆောင့်နေတာမို့ တချက်ဆောင့်တိုင်း အင့်ခနဲ အင့်ခနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားကာ သားအိမ်ဝက ပူခနဲ ပူခနဲဖြစ်သွားသည်။
အသိစိတ်နဲ့ လူက ငြင်းဆန်နေပေမယ့် ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေက တဖြည်းဖြည်းလက်ခံလာသည်။ ပြည့်ဝတဲ့အရသာက တကိုယ်လုံးကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ပျံ့နှံ့လာသည်။ငြိမ်းချမ်းက ဥမ္မာခင်းနားကိုကပ်ကာ တစ်တစ်ခွခွတွေပြောပြီး ဆောင့်နေဆဲပင်။
”အဟင့် ဟင့် အင့် အင့် အင့် တော်ပြီ တော်ပြီ ဟင့် ဟင့်”
နှုတ်ခမ်းက ငြင်းနေပေမယ့် သူမယောက်ကျားနဲ့ ကွာခြားစွာ ကာမအရသာကို ပြည့်ဝစွာပေးနေတာကို စိတ်က တဖြည်းဖြည်းပါလာသည်။ သူမ ငြင်းဆန်ချင်သည်။ မဟုတ်ဘူး ဒါငါမဟုတ်ဘူး။ ငါ့ကို တခြားလူတယောက်က မုဒိန်းကျင့်နေတာ ။ ငါလက်သင့်မခံဘူး တွေးနေပေမယ့် မူးကလဲမူး ဆောင့်ချက်တိုင်းက သူမအရင်က ဘာလိုအပ်မှန်း မသိတာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်မေးမိတဲ့အရာက ဒါပါလား ဆိုတာသိသွားပြီး စိတ်ကနှစ်ခွဖြစ်နေသည်။
ငြိမ်းချမ်းလဲ ဥမ္မာခင်ရဲ့ အပြောင်းအလဲ ကိုသတိထားမိတာကြောင့် ဥမ္မာခင်နားကိုကပ်ကာ စိတ်ကြွစေရန် ထပ်ပြီးတစ်တစ်ခွခွပြောလိုက်ကာ လိးကိုတဆုံးထုတ် တဆုံးထည့် မှန်မှန်ဆောင့်နေသည်။ အဖုတ်က အရည်တွေနဲ့ လီးဝင်တိုင်း တဗြွတ်ဗြွတ် တဗျစ်ဗျစ်နဲ့ အသားခြင်းရိုက်တဲ့အသံကလဲ အခန်းထဲမှာ ဆူညံနေသည်။
ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို လက်နဲ့ချိတ်ကာ ကိုယ်က ရှေ့ကိုငိုက်ထားတာမို့ ဖင်ကြီးက ကြွတက်နေကာ လီးတချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း အတွင်းထဲကို နက်နက်ဝင်သွားကာ ဖိလိုက်တိုင်း မွေ့ရာက အတွင်းဖက်ဝင်သွားပြီးပြန်ကန်လာပြန်တာမို့ တချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း ပြန်ပြန်ကန်ကန် တက်လာတာမို့ ဆောင့်ချက်တိုင်းက ဥမ္မာခင့်အတွက် ရူးသွပ်မှုဖြစ်စေသည်။ မရတော့ပေ။
ဥမ္မခင် ဆန္ဒကို အသိနဲ့ ဘယ်လိုမှ ထိန်းချုပ်လို့မရတော့။ အထိအတွေ့နောက်ကို ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားပြီ။ မိန်းမကိစ္စကို ကျွမ်းကျင်ဆရာကျတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရဲ့အောက်မှာ ကျရှုံးသွားပြီ။
”အ ဟ ဟ အင့် အင့်”
ဒါကြောင့် သူ နို့သီးခေါင်းတွေကို ညှစ်လိုက်ရင်း….
”အား ကျွတ်ကျွတ် ကောင်းတယ် အ ဟင့် ဟင့် နာတယ်”
ငြိမ်းချမ်းပြုံးလိုက်သည်။ သူတချက်ချင်းဆောင့်လိုက်ပြီး နို့တွေကိုငုံ့ကာ စို့လိုက်သည်။ ဥမ္မာခင် စိတ်ကအရမ်းကို ကြွလာသည်။ ပြီးချင်လာသည်။
”အ အင့် အင့် ဆောင့် ဆောင့် မရပ်နဲ့ ခပ်နာနာလေးဆောင့်ပေး ကောင်းတယ် ဟား ကောင်းတယ် အား အား ပြီးပြီ အစ် အစ် ပြီးပြီ အ အ ဟားးးး”
ဥမ္မာခင် ပြီးသွားပြီသူ့ကိုအတင်းဖက်ကာဖင်ကို အတင်းကော့ကာ ကပ်ထားပြီးတဆက်ဆက်နဲ့ ဖြစ်နေသည်။ ခြေတွေက ကုပ်ကွေးတက်ကာ ပါးစပ်က ဘယ်လိုအသံတွေမှန်းမသိ။ သူ ဥမ္မာခင်ကို ပြန်ဖက်ပြီး နှုတ်ခမ်းကို နမ်းလိုက်ရာ ဥမ္မာခင်လဲ မွတ်သိပ်စွာ ပြန်နမ်းလေသည်။
”အဟင့် ဒီလောက်အကြာကြီးကို မပြီးသေးဘူးလား။ စိတ်ညစ်ပါတယ်”
”သူ့စိတ်ကြီးပဲ လူကိုအရုပ်လေးကျနေတာပဲ။ ဖယ်ဦးလေ သူကဖိထားမှတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့”
ငြိမ်းချမ်းလဲ ထလိုက်ရာဗလွတ်ဆိုတဲ့အသံနဲ့အတူ အဖုတ်ထဲမှ အရည်တွေ လျှံ့ကျလာသည်။ ဥမ္မခင်လဲ ရင်ထဲ ဟာခနဲ ဖြစ်သွားသည်။ အနားက ပင်တီကိုအမြန်ယူကာ အဖုတ်ကိုအုပ်ကာ သုတ်လိုက်ပြီးငြိမ်းချမ်းလီးကို ကြည့်မိလိုက်တော့ ရင်ထဲဖိုသွားသည်။
ကုတင်အစွန်းမှာပဲ ကုန်းပေးလိုက်သည်။ ငြိမ်းချမ်းလဲ ဥမ္မာခင်ရဲ့ တင်ပါးတွေကို ညှစ်လိုက်ပြီး ဖျန်းခနဲရိုက်ကာ….
”လှလို့ရိုက်တာ မင်းဖင်က လုံးနေတာပဲ” ပြောရင်တဖတ်ဖတ်နဲ့ရိုက်နေသည်။
ဖြူဖွေးတဲ့တင်ပါးတွေက လက်ရာတွေနဲ့ နီရဲလာသည်။ ဥမ္မာခင်မှာ သိတက်စ အရွယ်ကတည်းက ခုချိန်ထိ သူဌေးသမီးတစ်ဦးလဲ ဖြစ်တာမို့ ဒီလိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း မဆက်ဆံခံရဖူးပေ။ ယောက်ကျားရတော့လဲ ယောက်ကျားက နုနုညံ့ညံ့သာ ဆက်ဆံသည်။ လင်မယားချင်းလုပ်ရင်လဲ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းမလုပ်။
ဒါကြောင့်ခုလို ဆက်ဆံခံရတာ ပထမဆုံးမို့ စိတ်ထဲမှာ အထူးအဆန်းဖြစ်ကာ သဘောကျလာသလိုလို။ ငြိမ်းချမ်းက တင်ပါးတွေကိုရိုက်ရင်း ဖင်နှစ်ခြမ်းကို ဖြဲလိုက်ရာ နီရဲရဲ ခရေပွင့်လေးကိုတွေ့လိုက်ရတော့ အဖွင့်မခံရသေးမှန်းသိလိုက်တာမို့ တရက်တော့ ခရေခြွေပစ်မယ်လို့စိတ်ကကြိမ်းရင်း စအိုကို လက်မနဲ့ကုတ်ခြစ်ကာ….
”တောက် ခရေပွင့်လေးက ချစ်စရာလေးကွာ ”
ဥမ္မာခင် ဖင်ဝယားသွားပြီး ရှုံသွားသည်။
”ဟင့် လုပ်စရာရှိတာမလုပ်ဘူး ယားတယ် ဘာတွေလျှောက်လုပ်နေတာလဲ အို အဟင့် ယားပါတယ်ဆို”
ငြိမ်းချမ်းရဲ့အပြောအဆို အကိုင်အတွယ် တွေကြောင့် ဥမ္မာခင် စိတ်က တက်ကြွလာရပြန်သည်။ ငြိမ်းချမ်းလဲ ကုန်းတဲ့ပုံစံကို ပြင်ပြီးနောက်ကနေ ဥမ္မာခင့်အဖုတ်ဝကိုတေ့ကာ လီးနဲ့ထည့်လိုက်ရာ….
”ဟ အ အ ဖြေးဖြေး နာတယ် အာ့ ရှီး ”
”အ ဖြေးဖြေး အောင့်တယ်”
ငြိမ်းချမ်းလဲ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို ညှစ်ကိုင်ပြီး လီးကိုဖြေးဖြေးချင်းတဝက်လောက်ဆွဲထုတ်ကာ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်ထည့်လိုက်တော့ ဥမ္မာခင် ရှီးခနဲ ဖြစ်သွားပြီး အရသာခံနေသည်။သူလဲ ဖြည်းဖြည်းချင်း တချက်ချင်းဆောင့်ပေးလိုက်သည်။
အချက်ပေါင်းသုံးဆယ်လောက်ကျ ဥမ္မာခင် ခံနိုင်လာကာ ဆောင့်စေချင်လာသည်။ တအင့်အင့်နဲ့ နောက်ကို ပြန်ပြန်ဆောင့်ပေးနေသည်။ သူလဲ ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်ပေးလိုက်ရာ ကောင်းသွားသည်။ ဆောင့်ချက်တိုင်း ဖင်ကတုန်တုန်သွားသလို ပခုံးကျော်ကျော်ဆံပင် နီညိုရောင်ကလဲ ဝဲခနဲ ဝဲခနဲခါသွားသည်ကို ကြည့်ရင်း သူသဘောကျမိသည်။
”အား ကျွတ်ကျွတ် ကောင်းလိုက်တာ ဟ ဟ အင်းဆောင့် ဆောင့် အိ အိ အိ”
”အင်း ပြီးလိုက် ရတယ် ဆောင့်ဆောင့် ဥမ္မာလဲ ပြီးတော့မယ် ဟား အ အ”
သူလဲ ဆက်တိုက်မရပ်မနားဆောင့်ချလိုက်သည်။ လီးတစ်ခုလုံး ကျင်တက်လာကာ လီးကို အဆုံးထိဆောင့်ထည့်လိုက်ပြီး အရည်တွေကို ပန်းထည့်လိုက်ချိန်ပဲ ဥမ္မာခင်လဲ ပြီးသွားကာ သူ့လီးကို တချက်တချက်ညှစ်နေသည်။
နှစ်ယောက်သာ ကုတင်ပေါ်သို့ ဘေးတိုက်လှဲချကာ အနားယူလိုက်ကြသည်။ ဥမ္မာခင် နို့လုံးကျစ်ကျစ်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်သည်။ တော်တော်လေးကြာတော့မှ ဥမ္မာခင်က ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားသည်။ သူလဲ တစ်ရှူးထယူကာ သုတ်လိုက်ပြီး အမှိုက်ခြင်းထဲထည့်ကာ အတွင်းခံဝတ်ပြီး ကုတင်ပေါ်မှာ အနားယူလိုက်သည်။
ဥမ္မာခင်ပြန်ထွက်လာတော့ တပတ်ကို ပတ်ထားသည်။ ကုတင်နားရောက်တော့
”ဟင့် ဘာလုပ်နေတာလဲ ပြန်တော့လေ”
”မပြန်ပါဘူး မင်းကို လိုးလို့မှမဝသေးတာ”
”ဟင့် စကားကလဲ ကြမ်းလိုက်တာ”
သူမကို ဆွဲချလိုက်ကာ နှုတ်ခမ်းကိုနမ်းလိုက်သည်။ ပြီးတော့ စောင်ခြုံ ပြီး နှစ်ယောက်သားဖက်ရင်းနဲ့ အိပ်ပျော်သွားသည်။ မနက်ခြောက်နာရီလောက်ကျ သူနိုးလာတော့ ဥမ္မာခင်ကသူ့ဘေးနားမှာ မနိုးသေး။ သူလဲ ဥမ္မာခင်ပတ်ထားတဲ့တပတ်ကိုချွတ်လိုက်ကာ နို့တွေကိုကိုင်လိုက်တော့ .
”အင် ဟာကွာ သူများအိပ်ချင်နေသေးတဲ့ဟာကို။ ညတုန်းကလဲ သူနှိပ်စက်ထားပြီးပြီ။ ခုအိပ်ချင်သေးတယ်ကွာ”
ဥမ္မာခင်ဆက်ပြီးအိပ်နေတော့ သူနို့တွေကို ကုန်းစို့လိုက်ပြီး လက်တဖက်ကျန်တဲ့နို့ကို ရွရွလေးပွတ်ချေကစားနေလိုက်သည်။ နို့သီးခေါင်းတွေကို ကလိလိုက်ချေလိုက်နဲ့လုပ်နေရာ ဥမ္မာခင် လဲ အသက်ရှူသံပြင်းလာကာ သူ့ခေါင်းကို ထိုးဖွနေပြီး ရင်ကကော့ကော့တက်လာသည်။
နို့တွေစို့နေရင်းနဲ့ လက်ကတဖြည်းဖြည်းချင်း အောက်ဖက်ကိုဆင်းကာ ပေါင်တွေကို ပွတ်ပေးလိုက်သည်။ ဥမ္မာခင်လဲ တရွရွဖြစ်လာပြီး ပေါင်ကကားလိုက်စုလိုက်ဖြစ်နေသည်။
သူလဲ နို့တွေကိုစို့ရင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ အောက်ကို ဆင်းကာဗိုက်တွေကို လိုက်စုပ်လိုက်ကာ နို့တွေကိုလက်နဲ့ချေနေလိုက်သည်။ တဖြည်းဖြည်းချင်းအောက်ကိုဆင်းလိုက်တော့ …
”အို့ မလုပ်နဲ့လေ။ ငရဲတွေကြီးကုန်တော့မယ် အို မလုပ်နဲ့ အ အ ရှီး ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲကွာ”
သူလဲပေါင်နှစ်ဖက်ကိုဖြဲကာအစေ့ကို လျှာနဲ့ ကလော်လိုက်ရာကော့တက်သွားသည်။ အစေ့ကို ဆက်တိုက် လျှာနဲ့ကလိလိုက်ရာ ထွန့်ထွန့်လူးသွားပြီး မွေ့ရာခင်းတွေကို လက်နဲ့ဆုတ်ချေကာ ကိုယ်က ကြွတက်လာလိုက် ပြုတ်ကျသွားလိုက်နဲ့။ အဖုတ်ထဲက အရည်တွေက ထွက်လာသည်။
သူအဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို စုပ်လိုက်ရာ အ ခနဲအသံနဲ့အတူ လူက တဆက်ဆက်တုန်နေသည်။ အဖုတ်အတွင်းထဲကို လျှာနဲ့ဝင်နိုင်သလောက်ထည့်ကာ ကလိလိုက်တော့ ဥမ္မာခင်တယောက် အသံတွေကမရပ်တော့။ ဖင်ဝကို လျှာနဲ့ကလိလိုက်ပြန်ရာ ဆက်ခနဲ တုန်သွားရပြန်သည်။
လက်မနဲ့ အစေ့ကိုချေပြီး အဖုတ်ထဲကို လက်နဲ့ကလိ ခရေကိုဝလုံးရေးနေတော့ ဥမ္မာခင် ဘယ်လိုမှမခံနိုင်တော့။ လူကတဆက်ဆက်တုန်လာကာ အုခနဲ မပီမသအသံနဲ့အတူ ခြေချောင်းတွေ ကွေးတက်သွားပြီး ပြီးသွားသည်။
”ကိုရယ် ဘယ်လို လုပ်တာလဲကွာ။ဥမ္မာ့ကို ငရဲပေးနေတာလား”
”ကဲ ဒီတခါ ကိုယ့်အလှည့် လီးစုပ်ပေး”
ပြောပြီးဥမ္မာခင်ပါးစပ်နားလီးကို ထိုးပေးလိုက်သည်။ ဥမ္မာခင်တယောက် ငြိမ်းချမ်းကို စွဲသွားသည်။ ငြိမ်းချမ်းနဲ့မှ သူမ မရဖူးတာရခဲ့ရတာပင်။ ခုလောလောဆယ်မှာ သူမယောက်ကျားနဲ့သမီးကို မေ့ထားလိုက်သည်။ ငြိမ်းချမ်းရဲ့ လီးကို စိတ်ပါလက်ပါစုပ်ပေးနေသည်။
ငြိမ်းချမ်းက အပြောအဆို သူမအပေါ်ဆက်ဆံတာက သူမကို တန်ဖိုးမထားမှန်းသိပေမယ့် သူမ နှစ်သက်နေမိသည်။ ဒါလဲ အထက်တန်းလွှာထဲက ပေါက်ဖွားလာတဲ့သူမရဲ့ စိတ္တဇလားပင်။ သူမကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆက်ဆံတာ ပြောဆိုတာ နှစ်သက်သဘောကျမိကာ သာယာနေသည်။ ငြိမ်းချမ်းရဲ့ ပြုစုမှုတွေကို တန်းတန်းစွဲမိနေသည်။
ငြိမ်းချမ်းက သူမ ပါးစပ်ထဲမှာပင်ပြီးသွားတာမို့ ညှီစို့စို့အရည်တွေ ပိုမြိုချမိပေမယ့် မထွေးထုတ်မိ။ အန်ချင်သလိုလိုဖြစ်သွားပေမယ့် သဘောကျမိသည်။ နှစ်ယောက်သား ရေအတူတူချိုးလိုက်ကြသည်။ ငြိမ်းချမ်းက ဆက်ဆံတဲ့အချိန်သာ သူမကို ဖာသာသာသဘောထားဆက်ဆံပေမယ့် ကျန်တဲ့အချိန်မှာ သူမယောက်ကျားထက် ယုယကာ အပြောကောင်းတာတွေကြောင့် သူမ သဘောကျရပြန်သည်။
ရေချိုးအဝတ်လဲ ပြီး မနက်စာစားကာ လေယာဉ်လတ်မှတ် သွားဝယ်လိုက်သည်။ သူမယောက်ကျား ဖုန်းဆက်တော့ မနက်ဖြန်ပြန်မယ်လို့ပြောသည်။ ငြိမ်းချမ်းနဲ့ တွေ့တယ်ပြောတော့ ငြိမ်းချမ်းနဲ့ စကားပြောချင်တယ်ဆိုလို သူတို့နှစ်ယောက်ပြောနေကြသည်။ ဂရုစိုက်ပေးဖို့ ဘာညာမှာနေတာနေမည်။
နှစ်ယောက်သား ငြိမ်းချမ်းတည်းတဲ့ ဟိုတယ်ကိုသွားကာ အဝတ်အစားတွေ အိတ်တွေယူကာ သူမဆီကိုပြောင်းလာခဲ့သည်။ သူမကလဲ ငြိမ်းချမ်းကို ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ဒီကကိစ္စတွေကိုမေ့ပစ်လိုက်ပြီး အရင်လို ပဲဆက်နေကြမယ်ပြောတော့ ငြိမ်းချမ်းကလဲ လက်ခံသည်။ ပြန်ရောက်ရောက်ချင်းပဲ သူတို့ လုပ်ကြပြန်သည်။
ငြိမ်းချမ်းက ဥမ္မာခင်ကို ကြမ်းကြမ်းတမျိုး နုနုညံ့ညံ့တသွယ် မနုမကြမ်းတဖုံးဆက်ဆံသည်။ သူမ အစွဲကြီးစွဲမိသွားသည်။ တရက်နဲ့တညလုံး ပုံစံမျိုးစုံ ခံစားလိုက်ရလေခြင်းပေါ့!…..